Arakan Human Rights Watch
ရခိုင်ပြည်နယ် လူ့အခွင့်ရေး စောင့်ကြည့်ရေး
Now Main menu , Sub menu taps on test
ရခိုင်ပဋိပက္ခ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်က စေလွှတ်သည့် ကော်မရှင် သုတေသန အဖွဲ့ တစ်ခုသည် ရိုဟင်ဂျာ တို့၏ ဖြေကြားချက်များကို မဟုတ်မမှန် ရေးသွင်းကြသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
G-Mail အကောင့်ကို စိတ်ချလက်ချ သုံးကြရအောင်
Posted by Human Rights at 9:12 PM No comments:
Posted by Human Rights at 9:11 PM No comments:
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်များ အထောက်အပံ့များ ဆိုးရွားစွာ လိုအပ်လျက်ရှိ
ပေါက်တော ဒုက္ခသည် စခန်း (ဓါတ်ပုံ - RB News)
ပေါက်တော ။ ။ ရခိုင် ပြည်နယ်၊ ပေါက်တော မြို့နယ်၊ ဆင်တက်မော်ရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းရှိ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခ သည် များမှာ လူသားချင်း စာနာသော အထောက် အပံ့များ အရေး တကြီး လိုအပ် လျက်ရှိကြောင်း သိရ သည်။ မဟာဆင် မုန်တိုင်း ရှောင်ရန် ငှက်ချောင်း ဒုက္ခသည် စခန်းမှ ဒုက္ခသည် များရောက်ရှိ လာ ပြီးနောက် ဒုက္ခသည် ဦးရေ တိုးပွားလာပြီး စားရေး သောက်ရေး ခက်ခဲ လာခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ မုန်တိုင်း ရှောင်ဖို့ နေရာရှာရင်း ဒီကိုရောက် လာတာ။ ကျွန်တော်တို့ တားမြစ် တာတွေ များတော့ ဘာမှ ယူလာလို့ မရဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာ စားဖို့ အစား အသောက် မရှိဘူး။ နေဖို့ နေရာ မရှိဘူး။ ၀တ်စရာ အ၀တ် မရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့မူလ နေရာကို လည်း သွားလို့ မရသေး ဘူး” ဟု ဒုက္ခသည် တစ် ဦးမှ RB News သို့ပြောသည်။
Posted by Human Rights at 1:21 AM No comments:
NGO Law Monitor: Bangladesh
Barriers to Resources A CSO seeking to receive or use foreign donations must obtain approval, known as FD Registration, from the NGOAB A CSO seeking to receive or use foreign donations must obtain approval, known as FD Registration, from the NGOAB A CSO seeking to receive or use foreign donations must obtain approval, known as FD Registration, from the NGOAB
Population 161,083,804 (2012 est.)
Life Expectancy at Birth Male: 68.21 years
Female: 71.98 years (2011 est.)
Literacy Rate Male: 54%
Female: 41.4% (2008)
Religious Groups Muslim 89.5%, Hindu 9.6%, others 0.9% (2004)
GDP Per Capita $1700 (2011 est.)
Source: The World Factbook 2009. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2010.
UN Human Development Index 146 (2011) 1 – 182
World Bank Rule of Law Index 26.5 (2010) 100 – 0
World Bank Voice & Accountability Index 38.4 (2010) 100 – 0
Transparency International 120 (2011) 1 – 180
Civil Liberties Score:4Free/Partly Free/Not Free
Foreign Policy: Failed States Index Rank: 29 (2012)
Human Rights: 7.1 177 – 1
The Voluntary Social Welfare Agencies Ordinance, 1961;
The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Rules, 1978; and
Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Rules, 1978
This was promulgated in 1978 to regulate the receipt and expenditure of foreign donations by CSOs. CSOs are required to submit certain information to the government inaprescribed form to obtain approval for undertaking projects with donations received from outside of the country or from aid-giving agencies of foreign origin working inside the country. Prior approval is also required ifaCSO wishes to use the services ofavolunteer from outside the country.
New Proposal of the Microcredit Regulatory Authority. In October 2012, the Microcredit Regulatory Authority (MRA) submittedaproposal to the Ministry of Finance of the Government of Bangladesh, requesting executive power to appoint administrators within microfinance NGOs. The MRA also wants the power to abolish the governing body, re-constituteanew governing body, and appoint the CEO of microfinance NGOs. The MRA is proposing that the administrator would initially be appointed for six months and, if necessary, for an additional six months. Mr. Abdul Awal, Executive Officer of the Credit and Development Forum (an association of microfinance institutions) has expressed concern about the proposal, saying that the MRA may abuse its power.
New Government Regulatory Commission? In late August 2012, the government initiated the process of establishinganew 11 member commission, which, according to government officials, would be responsible for “bringing all non-governmental organizations underasingle authority to hold them accountable and ensure transparency in their financial transactions.” The proposal to establish the commission, which came from the Ministry of Social Welfare, has been approved by the secretary-level Committee for Administrative Development and received support from the Ministry of Law. This commission would, reportedly, investigate any allegations of “anti-state” activities or “terror financing” carried out by NGOs and voluntary organizations registered under the various ministries and the NGO Affairs Bureau under the Prime Minister’s Office.
Draft Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Act. The NGO Affairs Bureau, which isaregulatory body authorized to coordinate and regulate the activities of CSOs operating with foreign funding, released the Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Act 2011 in January 2012 and has invited comment. The goal of the draft Act is to amend the 1978 Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance and to integrate the 1982 Foreign Contributions (Regulation) Ordinance into it. The draft Act preserves many of the existing barriers to the receipt of foreign donations and contributions. In particular, the draft Act, if enacted, would:
Require all organizations wishing to receive and use foreign donations/contributions to register with the NGO Affairs Bureau.
Require every NGO registered with the Bureau to establishaboard of directors (consisting of at least7members) andageneral board (consisting of 21 members).
Penalize NGOs if the Director General of the NGO Affairs Bureau believes that NGOs are engaged in activities which are "illegal or harmful for the country".
Two NGO umbrella bodies, the Association of Development Agencies in Bangladesh (ADAB) and the Federation of NGOs in Bangladesh (FNB), submitted written comments on the draft Act to the NGO Affairs Bureau (NGOAB) in March.
On May 16, 2012 the NGOAB hostedadiscussion with representatives of NGOs. NGOs shared their views and concerns with the draft Act. The Act is currently in the Prime Minister’s Office and will be placed before the Cabinet and Parliament afterareview by the Ministry of Law.
The key legal barrier to CSO resources in Bangladesh relates to foreign funding. As mentioned previously, the government established the NGO Affairs Bureau (NGOAB) within the Ministry of Establishment to coordinate and regulate the activities of CSOs operating with foreign funding. A CSO seeking to receive or use foreign donations must obtain approval, known as the FD Registration, from the NGOAB. Separate approval for all projects is required from the NGOAB, irrespective of prior registration by any other authority. The NGOAB is now located in the Prime Minister’s Office and is responsible for all contact with CSOs under the Foreign Donations Regulation Rules, 1978.
UN Universal Periodic Review Reports Universal Periodic Review: Bangladesh (2009)
U.S. State Department 2010 Human Rights Report: Bangladesh
Failed States Index Reports Foreign Policy: Failed States Index 2012
Posted by Human Rights at 1:20 AM No comments:
Labels: Articles, Laws
ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာများအတွက်ဖွဲ့စည်းထားသော ၉၆၉တို့ပေါက်ဖေါ်ကြီးများအတွက် ဖုံးဖော်အဖွဲ့ ကြီးဖြစ်မှာစိုးရတယ်
By burmamuslim on May 26, 2013
မြန်မာပြည်၏ ဒီမိုကရေစီခရီးလမ်းအစမှာ ပြည်သူတို့ရဲ့တက်ကြွ နိုးကြား လာမှုဟာ တိုင်းပြည် အတွက် အလွန်အား ရကောင်းတဲ့ အချက်ဖြစ် တယ်။ ထိုကဲ့သို့ပွင့်လင်းလာမှုဟာ ကောင်းမွန် သော် လည်း ကာလံ၊ဒေသံ၊ အဂ္ဂံ၊ ဓနံ ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို မကြည့်ဘဲ ဆန္ဒစောခဲ့တဲ့ အတွက် အချို့နေ ရာ တွေမှာ တိုင်းပြည်ကို နောက်ပြန်ဆွဲဖို့ လုံလောက်တဲ့ အခြေအနေတွေကို တွေ့နေရတယ်။
တစ်ချိန်ကနိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလို လက်ဝါးကြီးအုပ်ခဲ့တဲ့ အာဏာရှင် အဟောင်းတွေ ရယ် သူတို့နှင့် လက်သိပ် ထိုးပြေလည်ခဲ့တဲ့ ခရိုနီတွေရယ် ကျေးဇူးရှင်ကြီးလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ရဲ့အကျိုးစီးပွါး တွေရယ်ကို ဒီမိုကရေစီလမ်းအစမှာ ဆန္ဒစောပြီးထိပ်တိုက်တွေ့ အရေးယူဖို့ကြံစည် ခဲ့တာ ဟာ လမစေ့ဘဲမွေးတဲ့ ကလေးရဲ့ကျန်း မာရေးလိုမျိုး တိုင်းပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းနှင့် ပြည်သူ တို့ ဘ၀ကို တိုးတက်အောင် မလုပ်နိုင် ဘဲ နောက်ပြန်မလှည့် ဖို့တောင် မနည်းရုန်းကန်နေ ရ တယ်။
Posted by Human Rights at 3:00 PM No comments:
Rohingya History By Dr. Zamiruddin
Posted by Human Rights at 3:07 PM No comments:
Prophet Mohamed (SS:)'s Ewer ( Lota ): တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ရဲ့ လိုတာ တော်မြတ်...
The old time of Zam Zam well: ရှေးတုန်းက ဇမ်ဇမ် ရေတွင်းတော်...
New Design of Makkah: နောက်ဆုံးမက္ကဟ် ဒီဇိုင်းပုံ
Posted by Human Rights at 12:10 PM No comments:
ရိုဟင်ဂျာများကို လုံထိန် ကချောင်းပစ် သတ်နေပုံ
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်များ အထောက်အပံ့များ ဆိုးရွားစွာ လ...
AD ၁၅၂၅-ခု ရခိုင်ဒင်္ဂါးရှေ့မျက်နှာစာ မူစလင်ကလီမာယုံကြည်ချက်ပါခြင်း
1554-1555 ရခိုင်ဘုရင်မင်းဘင် သုံး မူစလင် ယုံကြည်ချက် Kalimah ပါ ဒင်္ဂါး
မွတ်စလင်ဘွဲ့ခံယူသည့် ရခိုင်ဘုရင် (၁၈)ဦး၊ 1554-1555- ရခိုင်ဘုရင်မင်းဘင်သုံးမူစလင် ယုံကြည် ချက် Kalimahပါ ဒင်္ဂါးနှင့်ကျောက် စာများကိုကိုထောက်ရှုလျှင်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး ထိုအချိန် ကတည်းကရှိ ကြောင်းပေါ်လွင် ထင်ရှားသည်။(Dr.Than Htun သမိုင်းမှ)
Myawady News 's photo နန်းခင်ဇေယျာ စတင်ဆွဲဖွင့်ခဲ့သော မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု တံခါးများ မြန်မာအင်တာနက်မယ် နန်းခင်ဇေ ယျာ တ...
ရခိုင်နယ်မှ မွတ်ဆလင်များ ၊ ဌေးလွင်ဦး
RB News 13.5.2013 ရခိုင်နယ်ရှိ အစ္စလာမ် သာသနာကို သက်ဝင် ယုံကြည်တဲ့ မွတ်ဆလင် သာသနာ ၀င်တွေကို အုပ်စု သုံးစု အဖြစ် တွေ့နိုင် ပါတယ်။ (၁) ...
Myawady News 's photo . လင်နှင့် မယားဝတ္တရား *************** လောကမှာ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး လက်ထက်ထိမ်းမြားကြားတဲ့အခါ...
သတင်းဆောင်းပါး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ၂၀၁၃ M-Media နေသစ်ထွန်း နိုင်ငံနှင့်အ၀ှမ်း ဖြစ်ပွားနေသော မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ြ...
လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော Gonorrhoea HO41 ပိုးသစ်တစ်မျိုးသည် ဆေးမတိုးတော့သော ရောဂါပိုးသစ်
လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော Gonorrhoea HO41 ပိုးသစ်တစ်မျိုးသည် ဆေးမတိုးတော့သော ရောဂါပိုးသစ် တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး AIDS ရောဂါပိုးထက် ပို၍ ဆိုးရွ...
လူလိမ်တို့ရဲ့နိဂုံး။ – ဌေးလွင်ဦး
ဆောင်းပါး – ဌေးလွင်ဦး - RB News (၁၄- မေ-၂၀၁၃) မိမိ အာဏာ အတွက် တိုင်းပြည် တစ်ခုလုံးကို လိမ်ညာ လှည့်ပတ်တဲ့ လူတွေ၊ ညစ်ပတ်တဲ့ သူတွေ၊ တ...
ဒေါက်တာ ဇမေရတ်ဒင်း ရေးသားပြုစုသော ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများ သမိုင်း
" လှည်းကူးမြို့ နယ် သတင်း"
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှည်းကူးမြို့ နယ်တွင် ယနေ့မနက် 9း00 ခန့် က ဈေးထိပ်အတွင်း အစ္စလာမ် ဘာသာ ၀င် တစ်ဦးဆိုင် နှင့် ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် ဆိုင်...
21 February 2013 အပြောနဲ့ အလုပ်တော့ ညီပစေပေါ့ဗျာ " ဥပဒေဖောက်ဖျက်လာလျှင် ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ မထောက်၊ လူကြီးသားသမီးလည်း အရေးယူမ...
By burmamuslim on May 26, 2013 မြန်မာပြည်၏ ဒီမိုကရေစီခရီးလမ်းအစမှာ ပြည်သူတို့ရဲ့တက်ကြွ နိုးကြား လာမှုဟာ တိုင်းပြည် အတွက...
Visitors' Online & Total Guests